Yan Aung: Indy မှ Atlanta သို့…
ညကပစ္စည်းတွေသိမ်းနေတာ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ် လူလည်းတော်တော် ပင်ပန်းနေပြီ. စာမေးပွဲပြီးကတည်းက မနားဖြစ်သေးဘူး. ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းရုံတင်မကဘူး ကျန်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ကောင်းကောင်း သိမ်းဆည်းခဲ့ရသေးတယ်လေ.
အခန်းဖော်နဲ့အိမ်ခန်းခကိစ္စတွေ၊ Bill ကိစ္စတွေ ရှင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ မနက် ၃ နာရီခွဲနေပြီ. မြန်မြန်လက်စသတ်ပြီးတော့ ထမင်းတစ်ပန်းကန်လောက် အမောတကောစားလိုက်သေးတယ်. ၄ နာရီမှာ အိမ်ကစထွက်ဖြစ်တယ်. သူငယ်ချင်းက ကားနဲ့လိုက်ပုိ့ပေးလို့တော်သေးတယ်. လမ်းပေါ်ရောက်တော့ ၄ နာရီခွဲစပြုနေပြီ. ကားကိုမှန်မှန်လေးမောင်းသွားတာပဲ. လေယာဉ်ကွင်းရောက်တော့ ၅ နာရီခွဲသွားပြီ. သိလိုက်တယ်. လေယာဉ်မှီမယ်မထင်တော့ဘူးလို့.. လူတန်းကြီးကလည်းအရှည်ကြီးပဲဗျာ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နေမိတယ်. ဒီနေ့လေယာဉ်စီးမယ်မစီးဘူး ချီတုံချတုံ လုပ်နေခဲ့တာမှာ နည်းနည်းအချိန်ကြာ သွားတယ်လေ… ဒီနေ့မစီးဘဲ နောက် ၃ ရက်နေမှ စီးမယ်ပေါ့. ခဏနားရင်းနဲ့ ရေးစရာကျန်နေသေးတဲ့ Term Paper ကို အပြီးသတ်မယ်ပေါ့ဗျာ. တစ်ခြားတစ်ဖက်ကလှည့်တွေးလိုက်တော့လည်း သူငယ်ချင်းအိမ်မှာနေရင်းလည်း ရေးလို့ရသားပဲပေါ့. လက်မှတ်ကို Cancel လုပ်ရင် $ 50 Fine ကပေးရဦးမှာဗျ. ဟိုလိုလိုသည်လိုလို လုပ်နေတာမှာ အချိန်နည်းနည်းပုပ်သွားခဲ့တယ်.
တကယ့်ကို ၁၀ မိနစ်နောက်ကျသွားတဲ့ပြဿနာပါပဲ. လေယာဉ် Check-in ပိတ်သွားပြီ. ဘာလုပ်မလဲ. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နောက်မှသိလိုက်ရတာက လေယာဉ်ကိုလွတ်သွားတာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းမှ မဟုတ်တာ. တော်တော်များတာပဲ. လက်မှတ်စစ်ပေးတဲ့ ၀န်ထမ်းက နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်. အိတ်တွေကို လက်မှတ်ကပ်ပေးနေတာပေါ့. သူတို့လည်း သနားပါတယ်ဗျာ. မနိုင်မနင်းကို ဖြစ်လို့. ဖုန်းကထမြည်လိုက်သေးတယ်. ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဆို ခပ်ချောချောလေးပဲ. ဆံပင်လေးတွေကို ပိုသီပတ်သီဖြစ်လို့. ရှေ့ကလူတွေကတော့ ရေရေလည်လည် စောဒကတက်တာပေါ့ဗျာ. Why? Why? ပေါ့. မျက်နှာတွေလည်းညိုလို့မည်းလုိ့ပေါ့. ၀န်ထမ်းတွေခမျာ သနားပါတယ်ဗျာ. သူတို့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲနော်. သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မျှကြည့်ပေး သင့်တာပေါ့. နောက်မကျချင်ရင် စောစောလာရမှာပေါ့ဗျာ. ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း မှားတာပါတာပဲလေ. ဒါပေမယ့်ဗျာ. စောဒကတက်တဲ့နေရာမှာ အမေရိကန်လူမျိုးတွေ တော်တော်သည်းသလိုပဲဗျ.
ကျွန်တော်လည်း ဘုရားလောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး. စိတ်ထဲမှာတင်းတာပေါ့. တကယ်တော့ သိပ်မနောက်ကျသေးပါဘူး. သူတို့လုပ်တာတွေ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေတာပါ. တစ်ယောက်တစ်ယောက်ကို Check-in လုပ်တာ အကြာကြီးပဲ. ကျွန်တော်လည်း လေယာဉ်ခဏခဏ စီးနေတာပဲ. ပျမ်းမျှကြာချိန်ကို တွက်မိပါတယ်. သူတို့တွေကလည်း ပိုကြာပါတယ်.
အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ လော်စပီကာကနေ အသံကြားပါတယ်.
`Yan Aung … Flight 117… Yan Aung.. This is the last call….” တဲ့…
ဒီမှာလည်း အိတ်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ Check-in မလုပ်ရသေးဘူး. သူငယ်ချင်းကလည်း ကျွန်တော့်နာမည်ကြားတယ်. ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်နေတာ သိတော့ နှစ်ယောက်လုံး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပြုံးပြပြီး နာမည်ထပ်ခေါ်တာကို နားထောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ ထောင်နေလိုက်တယ်ဗျာ. ဟတ်ဟတ်ဟတ်…
ဒီလိုမကြာအောင်လို့ အိမ်မှာကတည်းက Check-in Ticket ကို online ကနေ print ထုတ်ခဲ့ပြီးသားပါ. အိတ်ကိုပေါင်ချိန်စက်ပေါ်တင်လိုက်တော့ ၅၈ ပေါင်ဖြစ်နေတယ်. ပေါင် ၅၀ က အများဆုံးသတ်မှတ်ချက်ပါ. သွားပြီ. ထိပြီဆိုတာ သိလိုက်တယ်. Fine က $ 25 ပါ. စိတ်လျှော့ ရန်အောင်.. စိတ်လျှော့. ဒီထဲမှာ နွေရာသီဖတ်ဖို့ စာအုပ်တွေနဲ့ တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ အ၀တ်အစားအသုံးအဆောင်တွေပဲ.
ပေးလိုက်ပါ.. အဲလိုကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖျောင်းဖျနေခဲ့တယ်.
သူလေးကပြောရှာပါတယ်. လေယာဉ်ပျံနောက်ကျနေပြီတဲ့. Check-in ပိတ်သွားပါပြီတဲ့. ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကိုအေးဆေးပဲ ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်. ကျွန်တော်သိပါတယ်လို့. အဲဒါနောက်ထပ်အနီးဆုံးလေယာဉ်တစ်ခုခုနဲ့ တင်ပေးလို့ ဖြစ်နိုင်မလားလို့ ပြောပြလိုက်ပါတယ်. သူက ကျွန်တော့်ဆီက Complaint ကို မျှော်လင့်နေရာက သူမထင်ထားတဲ့ စကားတွေကို ကြားလိုက်ရတော့ စိတ်နည်းနည်းပျော့သွားပုံပေါ်တယ်. ကြည့်ပေးပါတယ်. သူ့ကိုတော့ တစ်ခုထပ် သတိပေးလိုက်ရသေးတယ်.
“I’m connecting at Atlanta!” လို့.
လေယာဉ်က Atlanta မှာ ပြောင်းစီးရဦးမှာမို့ပါ. အချိန်တွေ လွဲကုန်မှာစိုးလို့လေ..
သူလေးကပြန်ပြုံးပြပါတယ်. ခေါင်းညိတ်ပြီး computer ထဲမှာ လိုက်ရှာပေးပါတယ်.
ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာဗျာ. လောကကြီးမှာ ကိုယ့်ဘက်ကအရင်ဆုံး စပြီးပြောင်းလဲပေး နိုင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ပိုပိုခိုင်မာသွားခဲ့တယ်.
လေယာဉ်ချိန်တစ်ခုထည့်ပေးပါတယ်. ညနေ ၂ နာရီခွဲတဲ့. ၄ နာရီမှာ Atlanta ကိုရောက်မယ်. ၅ နာရီခွဲမှာ Atlanta ကနေ New York ကိုပျံပြီးတော့ ည ၇ နာရီမှာ ရောက်မယ်တဲ့..
ပြီးတော့ ဆက်ပြောပါသေးတယ်. ကျွန်တော့်ရဲ့အိတ်ကို လေယာဉ်ချိန်ထက် ၂ နာရီစောပြီး လက်ခံထားလို့မရပါဘူးတဲ့. Okay, then!
အိတ်ကိုပြန်ယူ. သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ လေယာဉ်ကွင်းထဲက Mall ထဲလျှောက်ကြည့်ရင်း Starbucks Coffee ဆိုင်မှာထိုင်ကြတယ်. (မလေးကို သတိရတယ်ဗျာ.)
သူငယ်ချင်းက Espresso ကော်ဖီသောက်တယ်. ကျွန်တော်ကတော့ Tazo Shaken Iced Tea တစ်ခွက်မှာသောက်တယ်. အားလုံးပေါင်း $ 4.15 ပေးရတယ်. သူငယ်ချင်းနဲ့လည်း အခုမှပဲ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောဖြစ်တော့တယ်. စာမေးပွဲကိုယ်စီနဲ့ ရှုပ်နေခဲ့တာ ကြာပြီလေ. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နွေရာသီမှာ ဘာလုပ်ကြမလဲ မေးလိုက်၊ ဟိုပြောလိုက်၊ ဒီပြောလိုက်နဲ့ပေါ့.
တော်တော်ကောင်းရှာပါတယ်. ကျွန်တော်ပျင်းနေမှာစိုးလို့ အဖော်ခဏလုပ်ပေး တယ်. ညက ၁၂ နာရီမှအိပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်က သူ့ကို ၃ နာရီခွဲမှာ သွားနှိုးတာလည်း စိတ်မဆိုးဘူး. ဆေးလိပ်လေးတစ်ဖွာဖွာနဲ့ ကားမောင်းပြီး ကျွန်တော့်ကို လိုက်ပို့တယ်.
ခဏနေတော့ သူပြန်သွားတယ်. ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း Starbucks မှာဆက်ထိုင်ရင်း ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့. Wireless များရမလားလို့ Connect လုပ်ကြည့်သေးတယ်. ရပါတယ်. ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံတောင်းတယ်ဗျာ. အဲဒါနဲ့ပဲ Browser ကိုပြန်ပိတ်ပြီး Ms Word ကိုဖွင့်. ဒီစာကို စရိုက်နေတော့တာပဲ..
ခု ၇ နာရီ ထိုးသွားပြီ. နောက်ထပ် ၆ နာရီလောက် လေယာဉ်ကွင်းမှာ နေရဦးမယ်. ဘာလုပ်မလဲ. စာပဲဖတ်ရတော့မှာပေါ့ဗျာ. Term Paper ဆက်ရေးရဦးမယ်လေ. ၃ မျက်နှာလောက်တော့ အနည်းဆုံးရမယ်လို့ မှန်းတယ်ဗျ. လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ရင် တော့ မဂျစ်တို့၊ မလေးတို့၊ ဘာညာတို့အတွက် ဝေဟင်ထဲမှကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပြီးတော့ကို စပ်ပေးလိုက်ဦးမယ်.
လောလောဆယ်တော့ Computer လည်း Battery သိပ်အားမရှိတော့ဘူး.. ပြီးတော့ နည်းနည်းအကြံထုတ်နေတာ. ပေါင်ပိုနေတဲ့ ၈ ပေါင်ကို ဘယ်လိုခွဲထည့်ရင်ကောင်းမလဲလို့ပေါ့..
Starbucks မှာဆက်ထိုင်လိုက်ဦးမယ် ပြီးရင်တော့ ထိုင်လို့ကောင်းမယ့် ခုံတန်းလျားလေးတစ်ခုခုမှာ စာဖတ်ရင်း Paper ထိုင်ရေးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ…
ပြောရဦးမယ်ဗျာ. ကျွန်တော်လေ Starbucks အထွက် လက်မှတ်တန်းစီတဲ့ လိုင်းနားက ခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာ သွားထိုင်နေခဲ့တယ်. အိတ်တွေကို ခဏနေရာချထားပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်နေတဲ့ လူတွေကိုကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ ဘာဖြစ်သွားလဲသိလား
၇ နာရီမှာ Starbucks က ထွက်လာခဲ့တယ်. ကျွန်တော်ပြန်နိုးလာတော့ ၉ နာရီခွဲနေပြီ. နည်းနည်းတော့ နေသာထိုင်သာရှိသွားတယ်ဗျ. ညကလည်းတစ်ညလုံးမအိပ်ရသေးဘူးလေ.
ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်စိကစားလိုက်တော့ ပလပ်ပေါက်လေးတွေ့တာနဲ့ ၀မ်းသာသွားတယ်. ကွန်ပြူတာကိုထုတ်၊ ပလပ်ပေါက်လေးကိုတပ်ပြီး ဒီစာကိုဆက်ရိုက်နေခဲ့တယ်. ဩော်. သီချင်းလည်းနားထောင်နေတာပေါ့ဗျာ. အင်တာနက်မရလည်းဘာဖြစ်လဲ. ကျွန်တော့်စက်ထဲမှာ သီချင်းတွေပေါမှပေါ…
အကြာကြီးတော့လည်း မသုံးဖြစ်လိုက်ပါဘူး. အရေးကြီးတာလုပ်ဖို့ရှိနေသေးတယ် လေ. သိတယ်မဟုတ်လား.. ပေါင်ချိန်ပိုနေတာကို ပစ္စည်းခွဲထည့်ဖို့လေ. Baggage အကြီးကိုဖွင့်. Hand Carry ကိုလည်းဖွင့်. နည်းနည်းမျက်စိကစားလိုက်တော့ Mac Laptop တွေ့တယ်. အဲဒီ့ကောင်က အနည်းဆုံး ၄-၅ ပေါင်လောက်ရှိမယ်. သူ့ကိုထုတ်လိုက်တယ်. ထပ်ကြည့်တော့ ဘောင်းဘီအထူတစ်ထည်တွေ့တယ်. ထပ်ထုတ်တယ်. ၂ ပေါင်လောက်ဖြစ်နိုင်တယ်. ပြီးတော့ ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ Interview စာမေးပွဲအတွက် မေးခွန်းဟောင်းတွေအထပ်လိုက်ကြီး ထည့်ထားတာ သွားတွေ့တယ်. လက်နဲ့နည်းနည်းဆကြည့်လိုက်တယ်. အင်း.. ၃ ပေါင်လောက်ရှိမယ်ဗျ.
အဲဒီ့ ပစ္စည်း ၃ မျိုးထဲက ဘောင်းဘီနဲ့ စာရွက်တွေကို Hand Carry ထဲကိုထည့်တယ်. Laptop ကို ကျောပိုးအိတ်ထဲကို ထည့်လိုက်တယ်. ကျောပိုးအိတ်ကတော့ တော်တော်လေးသွားပြီဗျ. ပြီးတော့ ကောင်းကောင်းမဖတ် ဖြစ်သေးတဲ့ ဦးဇောတိကရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ထုတ်ပြီး ကြောင်ပုဇွန်စားကျွတ်ကျွတ်ဝါးနေလိုက်တယ်ဗျာ. `Snow in the summer´ လေ. သိတယ်မဟုတ်လား. Celin Dion, BackStreet boys, Shania Twain သီချင်းလေးတွေနားထောင်ရင်း ဦးဇောတိကစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ လောကကြီးကနေ ခဏတာ ကင်းကွာနေခဲ့လိုက်တယ်ဗျာ.
၁၂ နာရီထိုးတော့ ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လေယာဉ်ကွင်းဆင်းလာ တာကို တွေ့ပါတယ်. နှုတ်ဆက်ရင်း လေယာဉ်နံပါတ်မေးတော့ အတူတူဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ရတယ်. သူလည်း ရောက်ရောက်ချင်း ဘာလုပ်တယ်မှတ်လဲ. အိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ပစ္စည်းတွေကို ဟိုရွှေ့ဒီပြောင်းလုပ်နေတယ်. ပေါင်ချိန်များနေလို့တဲ့. ဟတ်ဟတ်ဟတ်.
ကျွန်တော်ကတော့ လုပ်ပြီးသွားပြီမို့ ကောင်တာဆီကို ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ လျှောက်သွားခဲ့လိုက်တယ်.
ပေါင်ချိန်စက်ပေါ်ကို အိတ်တင်လိုက်တဲ့ အခိုက်အတန့်လေးကတော့ မာနကြီးတဲ့ ချစ်သူဆီက ကိုယ့်ကို အဖြေပေးခါနီးဆဲဆဲမှာ မျှော်လင့်စောင့်စားနေရတဲ့ တစ်ခါမှ ရည်းစားမထားဖူးသေးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ပေါ့…
နံပါတ်ပေါ်လာတယ်. ၄၈.၂ တဲ့. Not bad…
နောက်တစ်အိတ်တင်တယ်. ဒီအိတ်က ခုနက ပေါင်ချိန်ပိုပြတဲ့ အိတ်နော်. ဒီတစ်ခါကျတော့ သံဘူလာထီထိုးတဲ့အခါမှာ နံပါတ်တွေအော်နေတုန်း ကိုယ့်ကတ်ပြားလေးပေါ်က နံပါတ်လေးတစ်ခုပဲ ကျန်တော့တဲ့အခိုက်မှာ ထီနံပါတ်အော်နေတဲ့သူရဲ့ ပါးစပ်လေးအလှုပ်ကို ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ လှမ်းမျှော် ကြည့်နေတဲ့ ထီတစ်ခါမှ မပေါက်ဖူးသေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးရဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ပေါ့…
နံပါတ်ပေါ်လာတယ်. ၄၅ တဲ့..
ပွဲပြီးသွားပြီ. နည်းနည်းလှုပ်ရှားပေးလိုက်တာနဲ့ $ 25 သက်သာသွားတယ်. Economist ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့ Maximum Profit ရလိုက်တာပဲဗျ. ပစ္စည်းပြောင်းတာ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်. ရတာက $ 25 ဆိုတော့ တစ်နာရီကို $ 100 ၀င်တဲ့ White Collar လူစားမျိုးတစ်ယောက်လုိ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးမိလိုက်တယ်. ဒီလိုပါပဲဗျာ.
Security Check ထဲကို ၀င်ရတော့မယ်. မ၀င်ခင်မှာ ကျွန်တော်အိမ်က ထည့်ယူလာတဲ့ Sprite ဗူးလေးကို ကုန်အောင် သောက်နေတယ်ဗျ. ဟိုတလောက Terrorist တွေက ဗုံးကိုအရည်ပုံစံနဲ့ လုပ်ယူပြီး လေယာဉ်ပေါ်မှာခွဲဖို့ ကြိုးစားတာကို မိလိုက်သေးတယ်လေ. အဲဒီ့ကတည်းက အရည်တွေ၊ သွားတိုက်ဆေးတွေကို သယ်ခွင့်မပြုတော့ဘူး.. Hand Carry နဲ့ပြောတာပါ. Checked Baggage တွေထဲမှာတော့ ထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်. ဒါကြောင့်မို့ အချိန်လည်းနည်းနည်းစောနေသေးတာနဲ့ ဒီစာလေးကို ထိုင်ရေးလိုက်၊ Sprite လေးသောက်လိုက်နဲ့ ဆက်ရက်မင်းစည်းစိမ် ခံစားနေလိုက်ပါတယ်.
ခဏနေ Checkpoint ကိုဖြတ်ပါတော့မယ်….
လေယာဉ်က ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ စထွက်ပါတယ်. ပုံတွေထဲမှာ ကျွန်တော်စီးရမယ့်လေယာဉ်နဲ့ လေယာဉ်ပျံတက်ပြီးကာစ အပေါ်ကရိုက်ထားတဲ့ တိမ်ဖြူဖြူလွလွလေးတွေကို တွေ့ရပါမယ်.
း) မင်းရေးမယ့် ဝေဟင်ကကဗျာကို အားလုံး စောင့်နေကြတယ် ။
မျက်လုံးထဲမြင်လာမှာပေါ့၊ ဓါတ်ပုံတွေပါ ရိုက်ပြထားတာကိုး။ Anyway, Good reporting ပါ ကိုရန်အောင်။
ကောင်းလိုက်တာဗျာ ( စာအရေးအသားကို ပြောတာနော်.. တမှိုး မထင်နဲ့)
အရင်ရက်တွေက ကိုရန်လေးဘလော့ကို ၀င်မရလို့ ခုမှ အားလုံးစုပြီးဖတ်ရပါတယ်။
ပုံလေးတွေနဲ့ သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ကိုရန်လေးရဲ့ စာတွေ တ၀ကြီး ဖတ်ပစ်လိုက်တယ်။